I-ODM kunye ne-OEM-iArtie Garden International Ltd.
Izinto eziPhezulu zeTheyibhile
I-ODM kunye ne-OEM
Umseki kunye nomongameli
IArtie yasekwa ngo-1999 ngu-Arthur Cheng.
Kunye neqela lethu lokuwina iwonga kwiqela lamanye amazwe, ukuthanda kuka-Artie kudale uninzi loyilo loyilo kwaye ungumnini wamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-80.
Nesebe elinamava le-R & D kunye neengcibi ezinezakhono, uyilo lwe-ARTIE lubuyela ebomini ngokuveliswa ngemigaqo-nkqubo engqongqo yokulawula umgangatho kunye neenkqubo ...... Ukuqinisekisa uhlolo olunamanqanaba amaninzi.
I-Artie's Polyethylene high density synthetic kunye ne-non-fading fiber wicker iqinisekisa ubomi obude obungenakuchukunyiswa yi-UV, iChlorine kunye netyuwa yamanzi. Izakhelo zeAluminiyam ezenziwe nge-welding kunye ne-powder ziqinisekisa ukuzinza ngokuchasene nokugquma kunye nokuchithwa.
Sizakuqhubeka nokulandela amaphupha ethu kwaye senze iArtie ihlale iminyaka elikhulu okanye nangaphezulu.
Wicker kunye nefayibha
Amancinci amancinci e-polyethylene yi-mat esisiseko.
Nje ukuba bushushu kubushushu obuchanekileyo, iityhubhu ezinyibilikisiweyo zitsalwa ngemilomo eyahlukeneyo eyenza iimilo ezahlukeneyo kunye nobungakanani befayibha yonke into engenabungozi, engenabungozi kunye ne-100% enokuphinda isetyenziswe.
Sizama amakhulu eemilo, ubungakanani kunye nokucoceka, nokuba kugudile okanye kurhabaxa kwaye kucaba okanye kujikeleze, ifayibha yethu idlula kwizigaba ezininzi. Ukuzama ubungakanani obukhulayo ukusuka kwi-2.5 mm ukuya kwi-40 mm kunye nokuphuhlisa imibala eyiyo zonke ziyinxalenye yophuhliso lweArtie Fiber.
Nje ukuba igqityiwe, yonke ifayibha iyavavanywa kusetyenziswa umatshini olungelelanisiweyo kunye neearhente ukuqinisekisa ukuba imveliso egqityiweyo iyahlangabezana neemfuno zokusingqongileyo kwaye ayinakucinywa kukudinwa kwe-UV, ukukrazuka, iklorine kunye netyuwa.
Baqeqeshwe ngabaluki abaziinkunkqele kwaye besebenzisa ubuchule obuvela kwiiPhilippines, i-Indonesia kunye nezinye iindawo zehlabathi, abaluki bethu banodumo lokuba zezona zibalaseleyo emhlabeni.
Iqela lethu loyilo kunye nolawulo lusebenza kufutshane nesebe lethu lokuluka ukuphuhlisa iziqwenga zethu ezizodwa.
Sizama ukudala indawo eyonwabisayo, yeqela kunye nomsebenzi. Icandelo lethu lobuchwephesha lokuluka lihamba phambili kwaye liyazingca kurhwebo lwabo olukhethekileyo olwenziwe ngesandla. Inkqubo engqongqo yolawulo lwamanqanaba aqinisekisa umgangatho.
I-polyethylene yethu yokuxinana okuphezulu okwenziweyo kunye ne-non-fading fiber wicker iqinisekisa ubomi obude obungenakungena kwi-UV, iklorine kunye netyuwa yamanzi.
UKUQINISEKISWA KWEZISEKO NOKUQINISEKISWA KWEZAKHONO ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA
Umatshini wokuzenzekelayo we-
wokuDibanisa imibala ukuya kwi-Wicker
Igumbi 301 & 302, No.9 Shangchong NanYue Street,, kwisithili Haizhu, Guangzhou, China 510220
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iimveliso ezishushu , i- Sitemap , i- AMP Mobile